Abaanduulaha ciidamada dalka Jabuuti,Jen. Zakariye Sh Ibraahim oo soo gaaray Muqdisho
Muqdisho:-Wafdi uu horkacayo abaanduulaha ciidamada dalka Jabuuti, Jen. Zakariye Sheekh Ibraahim iyo wafdi la socda ayaa saaka soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana uu kulamo kala duwan la qaatay madaxda DFKM oo uu u horeeyo madaxweynaha DFKM Shariif Sheekh Ahmed iyo saraakiil ka tirsan ciidanka AMISOM .
Abaanduulaha ciidamada dalka Jabuuti, Jen. Zakariye Sheekh Ibraahim ayaa waxaa socdaalkiisa ku weheliya saraakiil ka tirasn ciidamada
dalka Jabuuti,waxaana ay u kuur gali doonaan halka la dajin doono ciidamada dalka Jabuuti ee iman doona magaalada Muqdisho.
Jen. C/kariin Yuusuf Aadan Dhego-badan Abaanduulaha ciidanka DFKM ayaa saxaafada la hadlay ayaa xaqiijiyey in wafdi uu horkacyo abaanduulaha ciidamada dalka Jabuuti, Jen. Zakariye Sheekh Ibraahim uu soo gaaray magaalada Muqdisho si uu ugu gogolxaaro ciidamada Jabuuti ee iman doona Soomaaliya isbuuca soo socda.
Dowlladda Jabuuti ayaa waxaa ay usbuucii hore ay sheegeen in ciidamo ka socda dalkooda ay ku soo biiri doonaa ciidanka AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho iyagoo sheegay in tirada ciidanka Jabuuti ee imaan doona magaalada Muqdisho in ay gaarayaan ilaa 850 askari.
Afhayeenka ururka Al-shabaab Sh.Cali Maxamuud Raage Cali Dheere oo la hadlay saxaafada ku hadasha afka ururka Al-shabaab ayaa uga digay in dowllada Jabuuti in ay ciidamo u soo diraan dalka Soomaaliya haddii ay u soo diraan ciidamo ay dagaalka ay kula jiraa ciidanka AMISOM ay ku soo biiri doonaa.